Midowga Yurub oo Siilaanyo ku adkeeyey inaan doorashada dib loo dhigin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulkad Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa manta Hargeysa kula kulmay Wakiilka Midawga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Mr Michele Cervone d’Urso oo uu weheliyo Safiirka Nairobi ee Ingiriiska Mr Neil Wigan.
Wasiir Maxamed Biixi Yoonis, ayaa sheegay in Madaxweynaha iyo Masuuliyiinta EU-du ka wada hadleen arimo ay ugu muhiimsan yihiin wakhtiga doorashooyinku dhacayaan iyo Guddida Madaxweynuhu u magacaabay Komishanka.
“Waxyaahaba ugu waaweyn eenu ka wada hadalay waxaa ka mid ahaa Doorashooyinka iyo wakhtiga ay dhacayaan iyo Dadka Cusub ee loo magacaabay Komishanka Doorashada oo ay aad ugu faraxsan yihiin inay dumarna ku jiraa.” ayuu yiri Maxamed Biixi Yoonis.
Wasiirku waxa uu intaasi raaciyay “Waxa kale oo aanu ka wada hadlay Cilaaqaadka iyo Mashaariicda ay Midawga Yurub nala wadaan. Madaxweynaha iyo Safiirku waxay isla garteen in Doorashooyinku wakhtigoodii dhacayaan, Dadaal xoog lehna aanu samaynayno oo aanu ku dededaalayno in doorashadu wakhtigeedii dhacdo”
Danjiraha Midawga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ayaa isna sheegay in kulanka Madaxweynaha uu la qaatay ay xoogga ku saareen sidii loo sii wadi lahaa hanaanka Dimuqraadiyadaynta iyo in wakhtigoodii ugu dhici lahaayeen.
Waxa uu sheegay in Kulamo uu la yeeshay Xisbiyada qaranka, Warbaahinta iyo Bulshada rayidka ah islamarkaana ay ka go’an tahay in doorashada la qabto sanadka loo asteeyay ee 2015-ka.
Xisbiyada Mucaaridka ee Somaliland ee UCID iyo WADANI ayaa ka shaki qaba in Siinaanyo dib u dhigo xilliga doorashada, waxeyna horay uga digeen iney dhisi doonaan dowlad KMG ah haddii doorashada laga dib dhigo sanadka 2015.
Maxaa laga yiri dhuxushii laga dhoofin jiray dekeda Baraawe?